Imandarmedia.com.np: प्रचण्डको आदेशमा मतपत्र च्यातियो, योजना तेजाब खन्याउन थियो : देवी ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)
Main News, News » प्रचण्डको आदेशमा मतपत्र च्यातियो, योजना तेजाब खन्याउन थियो : देवी ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)
प्रचण्डको आदेशमा मतपत्र च्यातियो, योजना तेजाब खन्याउन थियो : देवी ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)
देशको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना आइतबार रातिबाट स्थगित भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले मतपत्र च्यातेपछि लफडा सुरु भएको थियो । यहि विषयमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ ।
यसबिषयमा एमालेबाट भरतपुर महानगरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ ।
भरतपुरमा मध्यराति भएको चाँहि के हो ?
मतपरिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आइरहेको अबस्थामा माओवादी केन्द्रका एजेन्ट प्रकाश कँडेल, मधु न्यौपाने, दिलीप लगायतका व्यक्तिहरुले मतपत्र च्यात्ने निन्दनीय कार्य भयो । सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यात्न लगाइयो । निर्वाचनमा हार हुन लागेपछि मतपत्र च्यात्न लगाएर लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीलाई तोड्ने एउटा दुःखद घृणास्पद र लज्जास्पद क्रियाकलाप सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट भएको छ । बर्बर, तानाशाही र जंगली क्रियाकलाप यहाँ देखियो ।
कसरी यस्तो भयो ?
१९ नम्बर वडाको ७५ प्रतिशत गणना भइसकेको थियो । २० नम्बर वडाको बाँकी छ । जसमा सूर्य चिन्हले अत्याधिक मत प्राप्त गरेको अबस्था देखेपछि सत्तारुढ दलका उम्मेदवारले हारलाई स्वीकार गर्न नसकेर मतपत्र च्यात्ने जंगली कार्य भएको छ । यो प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा भएको हो ।
एकाएक यस्तो घटना भएको हो कि पहिल्यै केही संकेत मिलेको थियो ?
मान्छेहरु पहिल्यै आंशका गरिरहेका थिए । माओवादी र काँग्रेसले हार्दैछन्, षडयन्त्र गर्दैछन् मतपत्र च्यात्दैछन् तेजाब खन्याउँदैछन् भन्ने खालका कुरा हामीले सुनेका थियौँ । तर, यस्तो घृणित काम त के गर्लान भन्ने लागेको थियो । तर आज व्यवहारबाट यो कुरा प्रमाणित भयो । अब हामीलाई डर लागिरहेको छ ।
प्रहरीलाई खबर गर्नुभएन ?
हामीले पटकपटक प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्यौं । सूचना दियौं । तर, सूचना दिँदादिँदै पनि तिनै मान्छेहरु एउटा दलको एजेण्ट बन्ने, निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि मतपत्र च्यात्ने जस्ता निन्दनीय र घृणित कार्यहरु भए । प्रहरीले पनि खास चासो लिएको देखिएन् । यस्तो कुरा भन्नुपर्दा म आफै दुखित छु ।
अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
अब हामी निर्वाचनको बिधि प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छौं । निर्वाचनको विधि अनुसार जे विधि छ, त्यो विधि र प्रक्रिया अन्तरगत हामी अगाडि बढ्नेछौं । मतगणनाको जिम्मा लिने निकाय निर्वाचन आयोग हो । उसले कहिले अगाडि बढाउँछ त्यो उहाँहरुसँगै प्रश्न गर्दा उपयुक्त र सान्दर्भिक होला ।
(भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको सन्दर्भमा एमालेका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीसँग गरेको गरिएको कुराकानी ) हामीले यो अन्तर्वार्ता दैनिक नेपालबाट साभार गरेका हौ ।
Trending : Main News, News
नयाँ पुराना गृहपृष्ठ
प्रेमीसँगको पहिलो रात
जाँदाजाँदै सरकारका २ महत्वपूर्ण निर्णय, जसले प्रचण्ड माथिका आशंकालाई गलत सावित गर्‍याे
ऊर्जामन्त्रीले भारतलाई ‘पानीचोर’ भनेपछि बालुवाटारदेखि दिल्लीसम्म भूकम्प
नेपाली काँग्रेस फुट्यो,वि.पि पुत्रको नेतृत्वमा ‘काँग्रेस राष्ट्रवादी’ गठन
विप्लवले कोशी ब्यारेज भत्काउनु पर्ने भन्दै युवाहरु तातेपछि नेकपाले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति !
घतलाग्दो स्टाटस लेख्दै धुर्मुसले भने - '७७ दिनदेखि मुसहरबस्तीसंगै खाना खाँदा न हाम्रो जात गयो, न त इज्जत नै'
एमाले कार्यकर्ताद्वारा कुलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की
प्रचण्डको बिदाइमा झण्डै रोएनन् मुख्यसचिव ! जाँदाजाँदै भने - उहाँजस्तो राम्रो मुलुकमै कोही छैन
स्याङजा : माओबादि केन्द्र र नया शक्ति बिच पार्टी एकता हुँदै…
भाइरल बन्यो बालकृष्ण ढुंगेलको कठोर भाषण, भन्छन् मलाइ मुद्दा लगाउनेको फिला चिरिदिन्छु (अडियोसहित)
Tweets by ImandarMedia
सूचना बिभाग दर्ता
Copyright © 2015. imandarmedia.com. All rights reserved. Designed By Easysoft Nepal